အောက်တိုဘာလ 2017 - စာမျက်နှာ2- NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့်ဘိ, NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့် - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Home » 2017 » အောက်တိုဘာလ (စာမျက်နှာ 2)
audio / ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ရေး International
ရာထူး Audio / Video ထုတ်လုပ်မှု International ကုမ္ပဏီ: ဘာသာရေးကျောင်းတက္ကသိုလ်တည်နေရာ: New York ကနယူးယော့အမေရိကန်အမေရိကန်အကြောင်း 1886, ဘာသာရေးကျောင်းတက္ကသိုလ် (YU) တွင်တည်ထောင်ခဲ့သောအဆိုပါလစ်ဘရယ်အနုပညာအတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာထူးချွန်နှင့်အောင်မြင်မှုနှင့်အတူဂျူးလူမျိုးပညာသင်ဆုပေါင်းစပ်ပြီးတစ်ဦးအားကြီးသောအစဉ်အလာရှိပါတယ်သိပ္ပံ, ဆေးပညာ ဥပဒေ, စီးပွားရေး, လူမှုရေးအလုပ်, ဂျူးလေ့လာမှုများ, ပညာရေး, စိတ်ပညာ, နှင့်ပိုပြီး။ ကျနော်တို့ 6,000 ကျော်လုပ်ကိုင်တဲ့ဦးဆောင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပညာရေးအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ကြောင်း ...
ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ခြင်း Manager ကို (HID3518)
ရာထူး: ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ရေး Manager ကို (HID3518) ကုမ္ပဏီ: HID ကို Global တည်နေရာ: Austin TX အမေရိကန်။ အဆိုပါစံပြကိုယ်စားလှယ်လောင်းဇာတ်လမ်းပြောပြ၏အားကြီးသောအသိကအရေးကြီးတယ်, ကို Creative န်ဆောင်မှုများအဖွဲ့တို့ကဗီဒီယိုကအကြောင်းအရာ output ကို၏ထုတ်လုပ်မှုထောက်ပံ့များအတွက်တာဝန်ရှိသည်။ ဒီအနေအထားကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်တွင်းရေးနှင့်ပြင်ပအမှတ်တံဆိပ်, ထုတ်ကုန်, ဖြေရှင်းချက်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုမြှင့်တင်လိမ့်မည်ဆန်းသစ်, တိုးတက်သော, အမြင်အာရုံဆွဲဆောင်မှုဒီဂျစ်တယ်ဗီဒီယိုကိုဘဏ်ဍာဖန်တီးပါလိမ့်မယ်။ ...
ထုတ်လုပ်မှုမန်နေဂျာဗီဒီယို / Talk ကို Programming
ရာထူး: ထုတ်လုပ်ရေးမန်နေဂျာဗီဒီယို / Talk ကို Programming ကုမ္ပဏီ: SiriusXM တည်နေရာ: New York ကနယူးယော့အမေရိကန်ရာထူးအနှစ်ချုပ်: SiriusXM လက်ရှိအချိန်တွင်အဓိကဆွေးနွေးချက် programming ကို channel မှာမြင့်မားသောပရိုဖိုင်းကိုခွက်တဆယ်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်တစ်ထုတ်လုပ်မှု Manager ကိုရှာဖွေနေသည်။ ပြပွဲ features တွေအနိုင်ရဤသည်မှာလေးနာရီနေ့စဉ်ချီးမြှင့်အင်တာဗျူးတွေ, ဂီတနှင့်ဟာသ-bits တိုးချဲ့။ အဆိုပါအခန်းကဏ္ဍထုတ်လုပ်မှုအချိန်ဇယားဆွဲ, ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး, ဘတ်ဂျက်, သင်္ဘောသားငှါးဂီယာနှင့်စီမံခန့်ခွဲပါလိမ့်မယ် ...
ရာထူး: ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ရေး Manager ကိုကုမ္ပဏီ: TRX သင်တန်းတည်နေရာ: ဆန်ဖရန်စစ္စကို, CA အမေရိကန် TRX အဆိုပါအမှတ်တံဆိပ်များအတွက်ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ဗီဒီယိုနှင့်ဓာတ်ပုံကိုပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုဘဝသံသရာကြီးကြပ်ခြင်းနှင့် execute မှဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ရေး၏မျက်နှာစာ, ဖန်တီးမှု Manager ကိုရှာဖွေနေသည်။ သင့်အနေဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးမှု, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်အပါအဝင်ဗီဒီယိုများ Post-ထုတ်လုပ်မှုအတွက်တာဝန်ရှိသည်ဖြစ်ပေမယ့် B2B နှင့် B2C ဖို့ကန့်သတ်မည်မဟုတ် ...
ရာထူး: ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ရေး Manager ကိုကုမ္ပဏီ: Veeam တည်နေရာ: ဘော်စတွန် MA အမေရိကန် Veeam ဆော့ဝဲကတော့မာလ်တီမီဒီယာအဖွဲ့အပေါ်၎င်းတို့၏ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ရေးမန်နေဂျာအဖြစ်အစေခံတစ်ဦးမျက်နှာစာများနှင့်လုံ့လရှိသူသမ္မတလောင်းရှာဖွေနေသည်။ ဒီအဖွဲ့ကတစ်ဦးဦးဆောင်အဖွဲ့ဝင်တဦးအဖြစ်, ဒီသမ္မတလောင်းပူးပေါင်းမည်ဖြစ်ပြီးထုတ်လုပ်ရန်နှင့်အကောင်အထည်ဖေါ်ရန်လိုအပ်ကြောင်းအားလုံးဒေသများပေါ်တွင်ဒါရိုက်တာ, မာလ်တီမီဒီယာ & Creative န်ဆောင်မှုများနှင့်အတူတစ်ပြိုင်တည်းအလုပ်လုပ် ...
ရာထူး Audio / Video ထုတ်လုပ်မှု International ကုမ္ပဏီ: မျိုးချစ်မီဒီယာတည်နေရာ: မန်ဟက်တန်နယူးယော့အမေရိကန်မျိုးချစ်မီဒီယာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလယ်ကွင်းအမျိုးမျိုးအတွက်ကြုံတွေ့တျသှငျးခံဘာသာပေါင်းစုံပညာရှင်များကတည်ထောင်အသစ်ကရှေးရိုးစွဲမီဒီယာ startup, အဖြစ်အများပြည်သူနှင့်မိမိဆန္ဒအလျောက်ကဏ္ဍများဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကောလိပ်ကရက်ဒစ်ပူဇော်! ကျွန်ုပ်တို့၏ပုဂ္ဂလိကမီဒီယာကုမ္ပဏီနိုင်ငံတော်သမ္မတ Trump ထောက်ခံပါတယ်နှင့်အထူးအကျိုးစီးပွားအားဖြင့် operated ကျင့်ပျက်ခြစားပင်မမီဒီယာ, ဆန့်ကျင် ...
ရာထူး: ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ရေး Manager ကိုကုမ္ပဏီ: အမေရိကန်ခွေးဂေဟာကလပ်တည်နေရာ: New York ကနယူးယော့အမေရိကန်အဆိုပါ AKC ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်း join ဖို့ထုတ်လုပ်မှုမန်နေဂျာရှာကြံနေပါသည်! ကျနော်တို့အဖွဲ့က join ဖို့အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဆက်သွယ်ရေးကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အတူလွတ်လပ်သောအလုပ်သမားလိုအပ်ပါတယ်။ အရည်အချင်းပြည့်မီသောကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ, ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်မှု၏တံခါးသော့ကိုရှုထောင့်နှင့် ပတ်သက်. တတ်ကျွမ်းနားလည်တဲ့ဖြစ်သင့်ဖွဲ့စည်းရမည်နှင့်အစိုင်အခဲ Multi-tasking ကျွမ်းကျင်မှုရှိသည်။ လုပ်ငန်းတာဝန်များပါဝင်သည်ပေမယ့်ပါလိမ့်မယ် ...
ဂျက်ဖ် Cohen ကို newsnet Bidirectional အိုင်ပီ ENG ဂေဟစနစ်အဘို့အ Key ကိုအကောင့်ကိုမန်နေဂျာအဖြစ် IMT Vislink ပါတီဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်
xG နည်းပညာ, Inc ( "xG" ဒါမှမဟုတ် "ကုမ္ပဏီ" - အဆိုပါအသံလွှင့်ခြင်းနှင့် AV စနစ်ကဏ္ဍတွင်မှအဆုံး-to-end System ကိုအရောင်း၌သူ၏ကြှမျးအဆိုပါဆုချီးမြှင့်-အနိုင်ရရှိမှု Newsgathering ဖြေရှင်းချက် Sarasota, FL, အောကျတိုဘာ 30, 2017 အဘို့အပိတ်စီးပွားရေးကိုကူညီပါလိမ့်မယ် ) (Nasdaq: XGTI, XGTIW), ဝေဖန်ဆက်သွယ်ရေးဘို့, တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့်ကာကွယ်ရေးစျေးကွက်နှင့်ပုဂ္ဂလိကမိုဘိုင်းဘရော့ဒ်ဘန်းကွန်ရက်များထုတ်လွှင့်ဖို့ကြိုးမဲ့ဗီဒီယိုအားဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဦးဆောင်ပံ့ပိုးပေး ...
Sr; ထုတ်လုပ်မှု Engineer- ရဲ့ Virtual / Remote
ရာထူး: Sr; ထုတ်လုပ်မှု Engineer- ရဲ့ Virtual / Remote ကုမ္ပဏီ: Datapath ရှာရန်ကော်ပိုရေးရှင်းတည်နေရာ: New York ကနယူးယော့အမေရိကန်အခြေခံပညာအမည်: အဆိုပါအကြီးတန်းပံ့ပိုးမှုအင်ဂျင်နီယာချုပ်, ဖော်ထုတ်ဖြေရှင်းရာမှာနဲ့ hardware နှင့် software စနစ်များကိုပြုပြင်ဘို့အဓိကနည်းပညာဆိုင်ရာအရင်းအမြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာတစ်ဦးချင်းစီကိုတိုက်ရိုက်အလုပ်အမှုဆောင်အဆင့်ကိုဖောက်သည်ကိုထောကျပံ့မည်ထို့ကြောင့်မြင့်မားသောသမ္မာသတိ၏အဆင့်ကျွမ်းကျင်ပိုင်နှင့်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုအပျနှံရှိရမည်။ ရှိပါလိမ့်မည် ...
caption Editor ကို / ဂျူနီယာ caption Editor ကို
ရာထူး: စာတန်းထိုး Editor ကို / ဂျူနီယာစာတန်းထိုး Editor ကိုကုမ္ပဏီ: Aberdeen အသံလွှင့်န်ဆောင်မှုများတည်နေရာ: ချိုစန်တာမာဂရီး, CA အမေရိကန် Aberdeen အသံလွှင့်န်ဆောင်မှုများ Post-ထုတ်လုပ်မှုပုံစံအရှည်ဒစ်ဂျစ်တယ်ဖိုင်ပို့ဆောင်မှုအတွက်အထူးပြုကြီးထွားလာသော 16 တစ်နှစ်ထုတ်လွှင့်န်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီဖြစ်ပါသည်, စာတန်းထိုး, နှင့်ဘာသာစကားဝန်ဆောင်မှုများကိုပိတ်လိုက်တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပြောင်းလဲနေသော-ပျော်စရာအဖွဲ့ join ဖို့စာတန်းထိုး Editor ကို / ဂျူနီယာစာတန်းထိုး Editor ကိုရှာကြ၏။ ကျနော်တို့အလုပ် / ဘဝတန်ဖိုးထား ...
ကို Creative န်ဆောင်မှုများ Manager ကို
ရာထူး: ကို Creative န်ဆောင်မှုများ Manager ကိုကုမ္ပဏီ: San Antonio တွင်တည်နေရာမှာတက္ကဆက်တက္ကသိုလ်: San Antonio တွင် TX အမေရိကန်ဝန်ထမ်းတနင်္လာနေ့ထက်အခြားတစ်ဦးအချိန်ဇယားအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မည်ဆိုပါက - သောကြာ, 8: 00am - 5: 00pm, ယာယီ အကယ်. အလုပ်လုပ်ခဲ့ခံရဖို့နာရီနှင့်ရက်ပေါင်းသတ်မှတ်, လစာပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဟုတ်ကဲ့ Pay ကိုအခြေခံလစာလိုအပ်ပါသည်ပညာရေးဘွဲ့ရဲ့ဘွဲ့ကိုသင်သလားကစပြီးအတွေ့အကြုံကိုညီနေ့စွဲရွေးချယ်ခန့်အပ်ရေးနှုန်းအဆုံးသတ်ခြင်း ...
Paid ကျဆုံးခြင်း Internship - ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ရေး
ရာထူး: ကျဆုံးခြင်း Internship Paid - ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီ: Atlanta BLACK STAR တည်နေရာ: အတ္တလန်တာ GA အမေရိကန်ဖျေါပွခကျြအတ္တလန်တာက Black စတားဝဘ်ဗီဒီယိုအကြောင်းအရာဖန်တီးရန်ပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒနှင့်အတူတစ်ဦး, ဖန်တီးမှုပါရမီနှင့်အသည်းအသန်ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ရေးအလုပ်သင်ဆရာဝန်၏ search အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့အကျိုးခံစားရရှိရေးကိုဖို့စိတ်ကူးများကိုရောက်စေဖို့အားကြီးသောစွမ်းရည်နဲ့အာရုံစိုက်တစ်ဦးချင်းစီကိုရှာဖွေနေပါတယ်။ တစ်ဗီဒီယိုအဖြစ် ...
International - ထုတ်ကုန် (အပိုင်း-TIME)
ရာထူး: International - ထုတ်ကုန် (အပိုင်း-TIME) ကုမ္ပဏီ: Irving ၏စီးတီး, TX တည်နေရာ: Irving TX အမေရိကန်ယောဘသည်ဖော်ပြချက်: တာဝန်သတ်မှတ်အတွက်ကူညီ, ဗီဒီယိုကင်မရာများနဲ့ audio ပစ္စည်းကိရိယာများ operating နေဖြင့်ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုဘဏ်ဍာထောက်ပံ့ပေး ICTN န်ထမ်းများနှင့်အတူနီးကပ်စွာအလုပ်လုပ်ကိုင်ပါဝင်သည် ထနှင့်စတူဒီယိုနှင့်ကွင်းဆင်းညျဘဏ်ဍာဖြိုဖျက်နှင့်တာဝန်ပေးကဲ့သို့သောအခြားဆက်စပ်လုပ်ငန်းများကိုဖြည့်စွက်။ လက်ရှိစာရင်းသွင်းရမည်ဖြစ်သည် ...
ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ခြင်း Internship - Fall Semester (LA)
ရာထူး: ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ရေး Internship - Semester (LA) ကုမ္ပဏီ Fall: ဧဇ Productions တည်နေရာ: Los Angeles မြို့, CA ကိုအမေရိကန်သင်ကျောင်းများတွင်စာရင်းသွင်းပြီးအရည်အချင်းပြည့်မှီကျောင်း Credit ခံယူနိုငျရမညျ, ဒီနည်းကို Internship မရတဲ့ IS ** ဧဇ Productions ကဗီဒီယိုထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက်အထူးပြုတဲ့ဖန်တီးမှုအေဂျင်စီဖြစ်ပါတယ် ** ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပါနဲ့အစုစုကိုလင့်ထားသောပေးပို့နိုင်ပါသည်။ ကျွန်တော်တစ်ဦးတစ်ပါးရည်နပ်ရည်အလုပ်သင်ဆရာဝန်ရှာကြသည် ...
ဖက်ရှင်တီဗီ & ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ရေး Internship - နွေဦး 2018
ရာထူး: ဖက်ရှင်တီဗီ & ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ရေး Internship - နွေဦး 2018 ကုမ္ပဏီ: Videofashion တည်နေရာ: New York ကနယူးယော့အမေရိကန်ယောဘကိုအနှစ်ချုပ် Spring 2018 ဖက်ရှင်တီဗီ & VIDEO Internship - VIDEOFASHION - NEW YORK တစ်ဦးအစာရှောင်ခြင်း-ပွေးညီဖက်ရှင်သတင်းရုပ်သံနှင့်အွန်လိုင်းဗီဒီယိုကုမ္ပဏီတစ်ခု part- ရှာကြံနေပါတယ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖန်တီးမှုအဖွဲ့ join ဖို့အချိန်အလုပ်သင်ဆရာဝန်။ ဤသည်၏ကမ္ဘာအကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူရန်အခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါတယ် ...
ထုတ်လုပ်မှုစတူဒီယိုပံ့ပိုးမှုအင်ဂျင်နီယာချုပ် - အား NBC အားကစား
ရာထူး: ထုတ်လုပ်မှုစတူဒီယိုပံ့ပိုးမှုအင်ဂျင်နီယာချုပ် - အား NBC အားကစားကုမ္ပဏီ: NBCUniversal တည်နေရာ: Stamford မှန် CT အမေရိကန်ကြှနျုပျတို့ကို NBCUniversal အကြောင်းကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပရိသတ်ကိုဖို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ကမ္ဘာ့ဦးဆောင်မီဒီယာနှင့်ဖျော်ဖြေရေးကုမ္ပဏီတဦးတည်း, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဖျော်ဖြေရေး, သတင်းနှင့်အချက်အလက်များ၏စျေးကွက်သည်။ NBCUniversal သတင်းနှင့်ဖျော်ဖြေရေးရုပ်မြင်သံကြားကွန်ရက်တန်ဖိုးရှိသောအစုစုကိုတစ်ဝန်ကြီးချုပ်ရွေ့လျားမှုရုပ်ပုံကုမ္ပဏီပိုင်ဆိုင်လုပ်ကိုင် ...
2 ၏စာမျက်နှာ 53«12345	»	102030...နောက်ဆုံး»